October 16, 2017 in Oromia
Alaabaan ABO/Oromoo Mallattoo Diddaa Gabrummaa fi Aasxaa Walabummaa Oromiyaa ti (Ijoo Dubbii ABO Onk. 16, 2017) Qabsoo haqaa Sabni Oromoo Walabummaa isaa gonfachuuf geggeessaa turee fi jiru adda durummaadhaan kan hoogganu Addi Bilisummaa Oromoo Akeekaa fi Kaayyoon isaa galma gahiinsa qabsichaa ti. Jaalalaa fi deggersi dorgomaa hin qabne kan Ummatni Oromoo Dhaaba isaa Adda Bilisummaa […]
October 15, 2017 in Oromia
Abbaa Urjii tiin Qabsoon bilisummaa ummata Oromiyaa baroota hedduuf munyuuqqachaa baatullee arra bakka if duuba hin deebinee fii sadarkaa abdachiisaarra geeysee jirti. Irreeysii torbaan lama dura Hora Arsadeetti gaggeeyfame haala kan firaa fii diinaa fiis ifa godhee jira. Ayyaanni ummanni miliyoona shanii olitti shalagaman irratti arkaman milkiin xumuramuun, qabsaawotaa fii sab-boonota bira dabree warra diinaaf […]
Qixxeessaa Lammii Irraa | Onkoloolessa 15, 2017 Dhara dubbachuun dhugaa dubbachuu irra haffallata. Dharti humna qaba, gurra namaatti tola, qalbii nama hata, onnee nama si’eessa. Dhugaan garuu akka dharaa miti. Gurratti nama hadhaawa, nama dallansiisa, Namaa hin liqimfamu. Sababni bu’uura kana irraa ka’eef waa’ee amma namoota gara garaan dhimma sochii biyya keessaa irratti miidiyaalee gara […]
October 13, 2017 in Fincila Xumura Gabrummaa (FXG) Oromoo, Oromia
Via: Dula Mulugeta Gute #Gimbii Gimbiitii namni manatti hafe hin turre jedhan. Hunduu dheebuu bilisummaa qaba, bulchiinsi aantummaa uummataa qabu akkasitti mirga uummataa eegee bobbaasee galcha. Poolisiin kan uummataati, poolisiin Keenya nuuf galatoomaa!
October 13, 2017 in Oromia
Qixxeessaa Lammii | Onkoloolessa 13, 2017 Hunda dura fayyaa fi nageenyi Waaqayyoo hunda keenyaaf haa ta’u. Galata galfatnaa waaqaan barruu kiyya eegaluun fudhatama argachuu yaada dabarfachuu barbaaduuf irree ta’a jedhee waan abdadheef. Qajeelaa fi dabaan, nagaa fi balaan, galataa fi gadoon, fayyaa fi dhibeen, hojjataa fi sarangadeen, haasawaa fi hojiin, dhugaa fi dharti, Firaa fi […]
Uummanni Dinnaan Dide! Baarentuu Gadaa Irraa Har’a duulli nurratti banamee jira. Duula kaabaa kibbaan, bahaa lixaan nurratti baname kanamoo kan gaggeessaa jiru wayyaanee dha. Wayyaaneen waggoota 26n darbaniif Oromoorraa raftee hin beektu. Kan waggoota 3n darbanii ammoo adda. Barri baranaa ammoo bara Wayyaaneen duula xumuraa ummata Oromoorratti labsiteedha jechuutu danda’ama. Aga’aaziin waggoottan darbaniif keessumaa ammoo […]
Godina Arsii Lixaa Magaalaa Shaashamanneetti rasaasa Loltoonni Wayyaanee ilmaan Oromoo hiriira ba’an irratti bananiin Oromoonni afur wareefamuu, Godina Qellem Wallaggaa Magaalaa Danbidoolloo keessatti tarkaanfii qeerroon fudhataniin loltoonni wayyaanee lama madaa’uu fi mormiin magaalota godinichaa edduu keessatti geggeeffamaa jiraachuu , Godina Harargee Lixaa Aanaa Bookeetti hiriirri mormii jabaan geggeeffamuu,akkasumas Oromoonni sadii rasaasa qaamota wayyaanee irra itti […]
Magaalli Shaashammanneen wayita ammaa FXG finiinsuun toohannoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo jala jirti. Dhaadawwan shaashimannee fi magaala Ambootti godhamaa jiru wal fakkaataadha – Abbaan biyyaa ABO dha – Down Down Woyane – Oromiyaan ni bilisoomti – Daangaan oromiyaa haa kabajamu – Oromiyaan dhiga ilmaan isheetiin bilisa baati – Gumaa goototaa fi jaallewwan keenya wareegamaa jiranii dhiigumaan […]